Nanjary lalàna ny fandraràn'ny «sunmark» an'ny Nosy Virginie amerikana «Toxic 3 Os»
Home » Vaovao momba ny fizahantany tompon'andraikitra » Nanjary lalàna ny fandraràn'ny «sunmark» an'ny Nosy Virginie amerikana «Toxic 3 Os»
Nosy Virijiny Amerikana Vao haingana ny governora Albert Bryan Jr no nanao tantara tamin'ny fanaovan-tsonia ny lalàna 8185, mandràra ny fanafarana, fivarotana ary fizarana tabilao masoandro misy ny "Os 3 poizina" an'ny oxybenzone, octinoxate ary octocrylene ao amin'ny faritany, miaro ny haran-dranomasina, ny fiainana an-dranomasina ary ny fahasalaman'ny olombelona. Ny lalàna, izay nolaniana tamin'ny firaisan-kina ary notohanan'ny loholona valo notarihin'ny senatera Marvin A. Blyden sy ny senatera Janelle K. Sarauw, no nahatonga ny USVI voalohany handray ny fanambarana nataon'ny FDA farany izay tsy nanaiky afa-tsy ny oksida zinc sy titanium dioxide (solomasoandro mineraly) toy ny akora fiarovana amin'ny masoandro azo antoka sy mahomby. The USVI Ny fandraràna dia manampy ny fangaro octocrylene amin'ireo akora simika voarara any Hawaii sy Key West, midika izany fa ny sunscreens mineraly azo antoka kokoa no nanjary safidy farany. Ny fandrarana feno dia manan-kery sivy volana mialoha ny fandraràn'i Etazonia hafa, ny 30 martsa 2020, ary misy fetrany manomboka eo noho eo.
"Ny fizahan-tany any amin'ny nosy Virjina no aintsika velona - fa mba hiantohana hatrany ny fisarihana mpitsidika amin'ny morontsiraka sy hatsaran-tarehy voajanahary an'izao tontolo izao amin'ny taona ho avy dia mila miaro ny haran-dranomasina isika ao anatin'ny fikatsahantsika manomboka fizahan-tany maharitra," "hoy ny governora Albert Bryan Jr." Ity dia zava-dehibe manerana ny Karaiba ary miantso ny hafa hanatevin-daharana ahy aho. Samy mizara isika rehetra ary tsy maintsy miaro ny ranomasimbe. ”
Araka ny National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), misy porofo ara-tsiansa milaza fa mahafaty ny haran-dranomasina ny oxybenzone ary mandrahona ny fahasalaman'ny vatohara amin'ny ankapobeny. Avy hatrany taorian'ny fanaovan-tsonia ny governora dia tsy mahazo mametraka baiko vaovao ho an'ny tabilao masoandro misy oxybenzone, octinoxate ary octocrylene intsony ireo mpivarotra am-pivarotana ary voarara tsy hahazo fandefasana aorian'ny 30 sept. miaraka amina akora simika mampidi-doza hafa toy ny avobenzone, noho izany ny fandraràn'ny octocrylene dia mamongotra ireo akora ireo ihany koa.
"Ny haran-dranomasina no manana ny harena voajanahary avo indrindra amin'ny tontolo iainana eto an-tany ary tena ilaina amin'ny fiarovana ny sisin-dranomasina sy ny fanohanana ny fiainana an-dranomasina, nefa very ny 80% ny haran-dranomasina Karaiba", hoy ny Senatera Blyden. "Ny fiarovana ny fananantsika dia zava-dehibe amin'ny fizahan-tany ary koa ny indostrian'ny jono sy ny nosintsika amin'ny ankapobeny."
Nanampy koa ny senatera Sarauw hoe: "Ireo simika ireo dia tsy manapoizina ny rano fotsiny, fa manapoizina antsika koa. Izy ireo dia hita tao amin'ny rononon-dreny, ny ra ary ny fisotrony ary miteraka fahasimban'ny sela izay mety hitarika homamiadana, hanakorontana ny hormonina ary mety hiteraka allergy mahery. Misy safidy azo antoka sy maharitra azo tanterahina kokoa toy ny masoandro tsy misy mineraly solitany izay tsy manimba ny vatohara sy ny fahasalamantsika. ”
“Ity fandraràna mamaky tany ity dia hanolotra fiarovana ny tontolo iainana sy ny fahasalamantsika saingy manan-danja ihany koa amin'ny lalàna ny fananganana fahatsiarovan-tena amin'ny loza ateraky ny akora simika vs. Ireo akora simika ireo dia avo 40 heny noho ny rano azo ekena ao amin'ny faritry ny faritany, ”hoy ny filohan'ny Fikambanan'ny Green Green Association ao amin'ny Harith Wickrema. Ny fikambanana John John nonprofit dia nitarika ny fanentanana momba ny fanabeazana momba ny loza ateraky ny masoandro amin'ny alikaola hatramin'ny 2016. "Ho fanampin'ny fahasimban'ny tontolo iainana sy ny olombelona, ​​ny toekarena miorina amin'ny fizahan-tany dia hiaina fahasimbana ara-bola raha maty ny vato harana sy ny ranomasina. Mety ho goavana ny vokan'ny rioka ary mila mandray andraikitra isika izao. ”
"Ny fandraràna ny sangan'asa maso tsy misy poizina amin'ny haran-dranomasina sy ny olony dia dingana lehibe iray amin'ny fiarovana ny haran-dranomasina any amin'ny Nosy Virgin US," hoy ny Dr. Paul Jobsis, talen'ny Ivotoerana momba ny fikarohana an-dranomasina sy tontolo iainana, University of the Virgin Islands . “Miaraka amin'ireo masinina masoandro misy poizina miditra amin'ny ranomasimbe, ny fanjonoana tafahoatra, ny riandrano tsy voafehy ary ny toetr'andro mamindro dia miteraka fahasimban'ny vatohara. Faly aho fa ny nosy Virginie amerikana no mitarika lalana ary nandany lalàna izay hanampy ny haran-dranomasina ary hampisongadina ny lanjan'izy ireo amin'ny toekarentsika sy ny tontolo iainana. ”
Ny "Os 3 misy poizina" amin'ny takelaky ny masoandro dia manasa ny vatan'ny olona rehefa milomano izy ireo ary miteraka fanamainana coral, haran-dranomasina "zombie" izay toa salama nefa tsy afaka mamokatra ary koa olana hafa. Miditra amin'ny ranomasina koa izy io rehefa misasa any amin'ny ranomasina ny rano maloto sy ny rano. Ny vaovao tsara dia hoe rehefa tsy misy rano ireo akora simika ireo dia afaka mamelombelona ny vatohara.
Raha tokony hialana amin'ny masoandro ny simika simika dia miaro amin'ny masoandro ny masoandro ary tsy manimba ny haran-dranomasina. Ny sarona toy ny mpiambina maimaika sy ny satroka dia mandaitra manoloana ny taratra manimba ny masoandro.
Nahasarika tsy nampoizina ny loza ateraky ny tabilao fanapoizinana noho ny filoham-pirenena Bill Clinton, rehefa nanome voninahitra an'i Wickrema izy noho ny fampianarana azy momba ny loza ateraky ny "Os 3 misy poizina" nandritra ny lahateniny tao amin'ny USVI CGI Post-Disaster Recovery Event tamin'ny voalohan'ny volana Jona. Nanohy nanentana ny mpanatrika i Clinton mba tsy hampiasa afa-tsy soritr'aretina azo antoka vatohara. "Tokony hataontsika izany," hoy izy.
Fakan-tsarimihetsika fiaramanidina fiaramanidina: jerena ve ianao?
Tolan'ny hafanana any Japon: 57 no maty, 18,000 XNUMX mahery hopitaly